Banyere Anyị - Qingdao Ole Pet Food Co., Ltd.
E hiwere Qingdao Ole Pet Food Co., Ltd. na June 2011.
Anyị bụ ụlọ ọrụ zuru oke nke na -ejikọ R&D, mmepụta na ire ahịa nri anụ ụlọ.
Companylọ ọrụ anyị na -etinyekarị aka na nri a mịrị amị, ahịhịa ọka mmiri, ọkpụkpụ ata na ọkpụkpụ mgbako dị ọcha maka nkịta na nwamba.
Ụlọ ọrụ anyị dị na Qingdao, ihe dị ka nkeji iri anọ site na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa na ọdụ ụgbọ mmiri Qingdao, netwọ ụgbọ njem emepere nke ọma na-enye ụzọ dị mma maka azụmaahịa mba ofesi.
N'ịdabere na ntọala nke nri anụ ụlọ Qingdao yana ihe karịrị afọ iri nke mmepe na ihe ọhụrụ, Ole etolitela ka onye nrụpụta nri anụ ụlọ ama ama n'ụwa; ngwaahịa ya na -ere nke ọma na Europe, America, Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na obodo ndị ọzọ.
Qingdao Ole Pet Food Co., Ltd. na -agba mbọ inye nri anụ ụlọ dị mma yana nchekwa. Anyị arụpụtala ụlọ ọrụ na-eme ka ọ dị ọcha ọkwa 100,000.00 dabere na teknụzụ imepụta nri anụ ụlọ dị elu sitere na Europe nke nwere ikike mmepụta 200/ọnwa.
Ogo na ihe ọhụrụ bụ ihe ndabere maka mmepe anyị. Ole na-emepụta iwu njikwa ngwaahịa siri ike iji nye ngwaahịa dị elu yana ezigbo ọrụ. Nhazi na iwu ụlọ ọrụ na -ahụ maka nri anụ ụlọ anyị na -agbaso ụkpụrụ nri mbupụ nke China, dịkwa na usoro nchekwa nri HACCP. Ka ọ dị ugbu a, anyị enwetala BRC, FDA, CFIA, HALA na asambodo ndị ọzọ, nke ga -egbo mkpa mbupụ nke nnukwu mpaghara mba ụwa.
Anyị raara onwe anyị nye n'ijere anụ ụlọ zuru ụwa ọnụ ngwaahịa dị mma. Companylọ ọrụ ahụ ga -enye uru nke anyị zuru oke, mụbaa mbọ R&D, wee gbalịsie ike ịbụ onye isi kachasị na ụlọ ọrụ nri anụ ụlọ.